Pejy fandokoana ny andro ho an'ny ray handraisana sy handokoana maimaim-poana
Tongasoa eto amin'ny pejinay fandokoana izay miatrika ny fetin'ny ray. Ireo pejy fandokoana dia manome fototra mety tsara hanomezana modely zazavavy sy zazalahy kely handokoana, ho fanomezana ho an'ny fetin'ny ray. Any Alemana, ny fetin'ny Andro Fiakarana dia nametraka ny tenany ho Andron'ny ray. Any amin'ny firenena maro hafa dia ankalazaina amin'ny Alahady faha-3 amin'ny volana Jona ny fetin'ny ray.
Pejy fandokoana ho an'ny Fetin'ny ray
Isaky ny inona, ny sary fandokoantsika momba ny fandokoana dia fanampiny tsara amin'ny fanomezana amin'ny Andron'ny Ray. Rehefa tonga ny fetin'ny ray dia mba diniho ihany koa ny antsika Modely amin'ny tapakila. Ny fanindriana ny rohy dia manokatra ny pejy mifanaraka aminy miaraka amin'ny maodely fandokoana:
Fetin'ny ray sambatra
Dada tsara indrindra eran'izao tontolo izao
Ho an'ny dada tsara indrindra eran'izao tontolo izao
Fitsangatsanganana Fetin'ny ray